VONO OLONA FENO HABIBIANA TENY TANJOMBATO : Lehilahy miisa 3 no voasambotry ny zandary
Raha tsiahivina kely ny zava-niseho teny amin’ny Faritr’i Tanjombato iny ny 3 aogositra 2018 lasa teo dia nahitana fatina tanora lehilahy miisa roa sy vehivavy iray teny amin’ny lakan-dranonan’Andranovaky. 13 octobre 2018
Voaporofo tamin’ny fisavana nataon’ny mpitsabo ny fotoana nanatanterahan’izy ireo ny asany fa tsatok’ antsy marobe no hita tamin’ny vatan’ireto olona namoy ny ainy ireto. Voafaritra araka izany fa famonoana tamin’ny fomba mahatsiravina no nihatra tamin’ireto olona ireto.
Nandritra ny fotoana nanaovan’ny zandarimariam-pirenena ao amin’ny sampana mpanao fikarohana momba ny heloka bevava teo aloha teo àry dia fantatra fa lehilahy miisa telo no voasambotra, izay voasaringotra tamin’ity raharaha ity ny 10 sy 11 oktobra lasa teo. Tao anatin’ny famotorana rehetra natao no nahitana fa ny roa aogositra 2018 dia nifanoratra tamin’ny namany iray nipetraka teny Tanjombato, tamin’ ny alalan’ny tambajotran-tserasera “ facebook” ilay vehivavy namoy ny ainy ity.
Hita tao anaty resaka nifanaovana fa “handeha hividy solosaina eto an-drenivohitra no anton-diany ary mba hitsena sy hiantrano ao amin’io namany nifampiresahany io. Rehefa tonga anefa ny fotoana dia nisy lehilahy roa hafa niaraka tamin’ilay namany ary nikasa hangalatra ny vola saika hividianana solosaina. Tamin’izay fotoana izay ihany koa anefa dia nitsena ity vehivavy namoy ny ainy koa ny olon-tiany. Avy hatrany dia namono azy roa kely izy telo lahy ary maty tsy tra-drano teo no ho eo ireto farany.
Nosamborina teny amin’ny toeram-piasany teny amin’ny “zone franche” moa ireto nahavanon-doza ka natolotra ny fampanoavana omaly 12 oktobra 2018.